3 Nzọụkwụ iji tọghata PPT ka MOV QuickTime Video
> Resource> tọghata> 3 Nzọụkwụ iji tọghata PPT ka QuickTime MOV Video
"Ọ bụ na o kwere omume iji tọghata PPT ka QuickTime MOV video na elu àgwà? My ụmụ akwụkwọ mere ka ọtụtụ PowerPoint faịlụ na-aga aga na music na-amasị m iji tọghata ha ka ha Apple ngwaọrụ dị ka QuickTime MOV videos."
Otu n'ime ndị enyi m, onye na-akụzi, dị nnọọ jụrụ m ajụjụ ahụ. Na m nọrọ oge dị ukwuu na-achọ maka ngwa iji mezuo ya mkpa ya, ma adịghị achọta afọ ojuju azịza ruo mgbe m chọtara a mma PowerPoint ka MOV Ntụgharị. Mgbe ahụ, m kpebiri dee ihe a ala, otu onye maka inyere ndị ọ dị mkpa iji tọghata PPT ka QuickTime MOV, ọzọ dị nnọọ enye njedebe ichu nta n'ihi na ihe ngwa.
Akpa, m ga-amasị emefu a nkeji ole na ole na-ewebata ngwa m na hụrụ. Ọ na-aha Wondershare PPT2Video Pro. Na ya, ị nwere ike tọghata ọ bụla PowerPoint ngosi faịlụ n'ime videos fọrọ nke nta ke niile formats ma ọ bụ ihe ọhụrụ obere ngwaọrụ na media egwuregwu. M na-amasị ya, na-anọkarịrị n'ihi na mgbe ị na-ahọrọ na mmepụta usoro maka video, ị na-adịghị echegbu onwe ha banyere parameters (bit ọnụego, etiti ọnụego, mkpebi, wdg), ebe ọ bụ na ị nwere ike họrọ ngwaọrụ ozugbo.
Ok, ọ bụ ezughị. Ka dị nnọọ na-ala otú iji tọghata PowerPoint ka QuickTime MOV.
1 Download na wụnye Wondershare PPT2Video Pro
Pịa "Free Download 'njikọ na-free ikpe mbipute nke PPT2Video Pro. Mgbe ahụ abụọ-pịa .exe faịlụ iji wụnye ya. Mgbe ahụ, pịa" Mepụta Video faịlụ site PowerPoint "ịbanye interface nke ngwa
2 Import PPT ka PowerPoint ka QuickTime MOV Ntụgharị
Pịa Tinye na-agagharị ma tinye PowerPoint na ngwa, wee pịa Next.
Onye Ntọala interface, họrọ MOV dị ka mmepụta video format si format ndọpụta ndepụta na pịa Next. Ma ọ bụ họrọ ngwaọrụ dị ka mmepụta usoro. Nọmalị, ndabara ntọala na-kachasị tupu oge eruo.
PS: Advanced ntọala ekpuchi okirikiri nhọrọ ukwuu ntọala, ndabere image, video size ma ọ bụ logo, n'okirikiri ntọala na ụda edekọ nhọrọ.
4 tọghata PPT ka QuickTime MOV
Mgbe ihe niile dị njikere, see Malite bọtịnụ iji malite converting PPT ka QuickTime MOV. Jut na nke abụọ, ọ na-eme, mgbe ahụ, ị nwere ike ịga na lekwasịrị nchekwa, chọta video. Mmekọrịta ya na gị na iPhone 4S, iPad 2, iPod site iPhone na-amalite ụtọ ma ọ bụ ọmụmụ ihe.
Olee otú iji tọghata VRO ka MP4
Saịtị dị ka Zamzar: Download na tọghata YouTube Videos Ndị Ọzọ Formats
Olee otú Bee / Split / Kpaa MTS (M2TS) Files
H.264 cutter: Olee otú Bee H.264 Files